Leicester City oo guul daro xanuunbadan kudhufatay Arsenal +SAWIRRO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Leicester City oo guul daro xanuunbadan kudhufatay Arsenal +SAWIRRO
Arsenal ayaa ku jirta xaalad musiibo ah kadib markii ay la soo kulantay guuldaradii saddexaad oo xidhiidh ah ee horyaalka Premier league waxaana Gunners isku raacay guuldarooyinkii kulamadii Crystal Palace, Wolves iyo Leicester City oo ugu danbaysay.
Arsenal ayaa hadda u muuqata mid aan u shaqaysan karin kaalmaha Champions league loogu soo baxo balse fursada kaliya ee ay haysato ayaa ah in kooxaha Man United, Chelsea iyo Tottenham ay iska diidan yihiin in ay fursadahooda ka faa’iidaystaan.
Kadib guuldaradii Tottenham soo gaadhay kooxaha Arsenal, Man United iyo Chelsea ayaa dhamaantood ka faa’iidaysan waayay fursadii hortaalay laakiin Arsenal ayaa noqotay kooxda ugu liidata ee 9 dhibcood soo lumisay saddexdii kulan ee ugu danbeeyay.
Leicester City ayaa 3-0 ku soo dhubatay Arsenal kadib markii uu Youri Tielemans goolka furitaanka dhaliyay halka Jamie Vardy uu laba gool ka dhaliyay Gunners si uu xaalada ugu xumeeyo Unai Emery kaas oo hadda ciyaartoyda kooxdiisa ugu baaqay in ay dareenkooda ku soo jeediyaan kulanka Valencia.
Waxaa layaab noqotay in 45 kii daqiiqo ee qaybtii hore ee kulankii Arsenal iyo Leicester City uu goolhayaha Foxes ee Kasper Schmeichel uu dhamaystiray baas bixin ka badan ciyaartoy kasta oo Arsenal ah waana xog muujinaysa sida ay Gunners u liidatay qaybtii hore ee kulankan.
Ceebta labaad ee ay Arsenal la soo kulantay ayaa ah in xidiga kooxda Leicester City ee James Maddison uu sameeyay darbooyin ka badan dhamaan darbooyinkii ay tuureen ciyaartoyda kooxda Arsenal ee qaybtii hore ee kulankan waana xog kale oo waji gabax ku ah Gunners oo ayna jeclayn in ay maqli karaan.
Ceebta saddexaad ee ay Arsenal ka soo xambaaratay kulankii Leicester City ayaa ah in boqolkiiba 33% kaliya ay lahaayeen boosishanka ciyaarta sida lagu xaqiijiyay xogta BBC Sport ee kulankii Leicester City iyo Arsenal waana boosishankii ugu horeeyay ee Gunners loo diwaan galiyay.
Rekoodhkii boosishanka ee ugu liitay ee Arsenal hore loogu diwaan galiyay waxa uu January 2015 kii markaas oo ay Man City la ciyaareen isla markaana ay boosishanka ciyaarta ka heleen boqolkiiba 35% balse markan heerkii ugu hooseeyay ayaa loo soo diwaan galiyay.